गुल्मी समाजको साधारण सभा – Gulmiews
गुल्मी समाजको साधारण सभा
April 20, 2015 Sanju Kauchha
No comments	भरतपुर । गुल्मी–चितवन मैत्री समाजले शनिबार १३ औँ साधारण सभा तथा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम गरेको छ । समाजका अध्यक्ष यमबहादुर विकेको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मानबहादुर विके प्रमुख अतिथि रहेका थिए ।
कार्यक्रममा भरतपुर अस्पतालका सिनियर कन्सल्टेन्ट डा. सुनिलमणि पोखरेल, प्राध्यापक डा. कृष्णप्रसाद काफ्ले, प्राध्यापक मक्तिनाथ ढकाल लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।